" အမနေဲ့နှဈယောကျထဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျအပနျးဖွဒေိတျလုပျခဲ့တဲ့ မွတျနိုးအေး " - Cele Gabar
” အမနေဲ့နှဈယောကျထဲ ပြျောပြျောရှငျရှငျအပနျးဖွဒေိတျလုပျခဲ့တဲ့ မွတျနိုးအေး “
မငျးသမီးသဈလေး မွတျနိုးအေးကတော့ လကျတလောမှာ သူရဲ့အမနေဲ့နှဈယောကျထဲ အပနျးဖွေ ဒိတျလုပျခဲ့ကာ အရမျးပြျောရှငျခဲ့ကွောငျးကို ” Staycation တဈရကျ လုပျကွမယျဆိုပွီး ပွောထားတာကွာပွီ ! အဲ့ဒါနဲ့ လိပျပွာ ဇာတျလမျးတှဲ premiere ရော shooting တှရေော ရှိနတေဲ့ တဈရကျကို ကိုယျ့အကွံနဲ့ကိုယျ တဈခကျြခုတျ သုံးခကျြပွတျ ဖွဈသှားအောငျ သှားနကွေမယျပေါ့ ! အဲ့မှာ မာမီမားသားက မေးရော “ဟယျ အမမြေားနရေ့ောကျပွီလား”တဲ့ သူ့ကို Mother’s Day Celebration လုပျဖို့ ပွောဖူးတာကိုး အဲ့တာနဲ့ ဘယျရမလဲ ရောခတြာပေါ့ ဟုတျတယျ လာ သှားကွမယျ My Treat ဆိုပွီး သားအမိနှဈယောကျ ပြျောပြျောကွီး Staycation လုပျကွတယျပေါ့နျော ပဲမြားတဲ့ အမဆေိုတော့လဲ ကိုယျက သူ့ကို ဓာတျပုံတှေ ပိုရိုကျပေးခဲ့ရတယျ။ သူ ပြျောနဖေို့ အရေးကွီးပါတယျလေ။ အမေ ပိုခြောတယျ မပွောရ ” ဆိုကာ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှနေဲ့အတူ သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ ဝမြှေခဲ့တာပါ။
သရုပျဆောငျမငျးသမီးသဈလေး မွတျနိုးအေးကတော့ သူစိမျးအိမျရုပျရှငျဇာတျကားမှာ “ကသေီ” ဆိုတဲ့ဇာတျကောငျနဲ့ ပရိသတျတှေ တခဲနကျအားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာသူလေးပါ။သူစိမျးအိမျဇာတျကားမှာ သူမရဲ့ ဇာတျကောငျကတော့ ဖှေးစိနျလေးရဲ့ အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးဖွဈပွီး သရဲကွောကျတတျတဲ့ ကောငျမလေးအဖွဈ ပီပွငျစှာ သရုပျဖျောနိုငျခဲ့တာကွောငျ့ သရုပျဆောငျသဈတဈယောကျလို့တောငျမထငျမှတျရလောကျအောငျ ကသေီဆိုတဲ့ကာရိုကျတာလေးနဲ့ ပရိသတျတှေ သတိထားမှတျမိစခေဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ကသေီလေးကတော့ အနုပညာအလုပျတှဆေကျတိုကျ လုပျကိုငျလာပွီပဲ ဖွဈပွီး မကွာသေးမီကထှကျရှိခဲ့တဲ့ ACID နဲ့ AR -T တို့ရဲ့ သီခငျြးသဈလေးဖွဈတဲ့” တဈယောကျတဈမြိုး ” သီခငျြးMTV လေးမှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျထားသေးပါတယျ။ပရိသတျတျောတျောမြားမြားက ကိုရီးယားမငျးသမီးလေးနဲ့ တူတယျလို့တောငျမှတျခကျြပေးခံရတဲ့သူလေးဖွဈတဲ့အပွငျ ယောကျြားလေးပရိသတျတှေ သဘောကအြားပေးခံရသူလေး တဈဦးပါ။ လကျရှိမှာလညျးလိပျပွာဇာတျလမျးတှဲမှာ မှုခငျးဆရာဝနျမလေးအဖွဈပါဝငျထားပါတယျ။ CeleGabar ပရိသတျကွီးလညျး မွတျနိုးအေးတို့ သားအမိရဲ့ ခဈြစရာ အမှတျတရပုံရိပျလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး မှတျခကျြတဈခုခုပါဦးနျော။
” အမေနဲ့ နှစ်ယောက်ထဲ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အပန်းဖြေဒိတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မြတ်နိုးအေး ”
မင်းသမီးသစ်လေး မြတ်နိုးအေးကတော့ လက်တလောမှာ သူရဲ့အမေနဲ့နှစ်ယောက်ထဲ အပန်းဖြေ ဒိတ်လုပ်ခဲ့ကာ အရမ်းပျော်ရွှင်ခဲ့ကြောင်းကို ” Staycation တစ်ရက် လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီး ပြောထားတာကြာပြီ ! အဲ့ဒါနဲ့ လိပ်ပြာ ဇာတ်လမ်းတွဲ premiere ရော shooting တွေရော ရှိနေတဲ့ တစ်ရက်ကို ကိုယ့်အကြံနဲ့ကိုယ် တစ်ချက်ခုတ် သုံးချက်ပြတ် ဖြစ်သွားအောင် သွားနေကြမယ်ပေါ့ ! အဲ့မှာ မာမီမားသားက မေးရော “ဟယ် အမေများနေ့ရောက်ပြီလား”တဲ့ သူ့ကို Mother’s Day Celebration လုပ်ဖို့ ပြောဖူးတာကိုး အဲ့တာနဲ့ ဘယ်ရမလဲ ရောချတာပေါ့ ဟုတ်တယ် လာ သွားကြမယ် My Treat ဆိုပြီး သားအမိနှစ်ယောက် ပျော်ပျော်ကြီး Staycation လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော် ပဲများတဲ့ အမေဆိုတော့လဲ ကိုယ်က သူ့ကို ဓာတ်ပုံတွေ ပိုရိုက်ပေးခဲ့ရတယ်။ သူ ပျော်နေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်လေ။ အမေ ပိုချောတယ် မပြောရ ” ဆိုကာ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေနဲ့အတူ သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ ဝေမျှခဲ့တာပါ။
သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးသစ်လေး မြတ်နိုးအေးကတော့ သူစိမ်းအိမ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ “ကေသီ” ဆိုတဲ့ဇာတ်ကောင်နဲ့ ပရိသတ်တွေ တခဲနက်အားပေးမှုကို ရရှိခဲ့တာသူလေးပါ။သူစိမ်းအိမ်ဇာတ်ကားမှာ သူမရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကတော့ ဖွေးစိန်လေးရဲ့ အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး သရဲကြောက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးအဖြစ် ပီပြင်စွာ သရုပ်ဖော်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်သစ်တစ်ယောက်လို့တောင်မထင်မှတ်ရလောက်အောင် ကေသီဆိုတဲ့ကာရိုက်တာလေးနဲ့ ပရိသတ်တွေ သတိထားမှတ်မိစေခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကေသီလေးကတော့ အနုပညာအလုပ်တွေဆက်တိုက် လုပ်ကိုင်လာပြီပဲ ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ACID နဲ့ AR -T တို့ရဲ့ သီချင်းသစ်လေးဖြစ်တဲ့” တစ်ယောက်တစ်မျိုး ” သီချင်းMTV လေးမှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသေးပါတယ်။ပရိသတ်တော်တော်များများက ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးနဲ့ တူတယ်လို့တောင်မှတ်ချက်ပေးခံရတဲ့သူလေးဖြစ်တဲ့အပြင် ယောကျာ်းလေးပရိသတ်တွေ သဘောကျအားပေးခံရသူလေး တစ်ဦးပါ။ လက်ရှိမှာလည်းလိပ်ပြာဇာတ်လမ်းတွဲမှာ မှုခင်းဆရာဝန်မလေးအဖြစ်ပါဝင်ထားပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးလည်း မြတ်နိုးအေးတို့ သားအမိရဲ့ ချစ်စရာ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပြီး မှတ်ချက်တစ်ခုခုပါဦးနော်။
” ဇာတိအညာမြေဘုရားပွဲမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲကာ ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဖြိုးရာဇာနိုင် “